Kooxda Bayern Munich oo si lama filaan ah ugu dhaqaaqday saxiixa xidig ka tirsan Manchester City – Gool FM
(Germany) 15 Maajo 2019. Bayern Munich ayaa si lama filaan ah ugu dhaqaaqday saxiixa xidig ka tirsan Manchester City, si ay u soo xero galiso inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga ee xagaaga soo socda.
Wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in kooxda Bavarian-ka ay bilowday wadahadalo ay kula soo saxiixaneyso xiddiga reer Germany iyo kooxda Manchester City ee Leroy Sané,
Wargeyska ayaa sheegay in kooxda Bayern Munich ay heshay ogolaansho ah in wadahadalo ay la furan karto wakiilada xiddiga reer Germany; si ay uga wada hadlaan suurtogalnimada uu ugu dhaqaaqi karo garoonka Allianz Arena xagaagan.
Kooxda Bundesliga ka dhisan ayaa dooneysa inay hesho badalka labada xidig waayeelada ah ee Franck Ribéry iyo Arjen Robben, iyagoo doonaya inay gacanta ku dhigaan saxiixa ciyaaryahankii hore ee kooxda Schalke.
Bayern ayaa diirada u saarisay 23 jirka kooxda Manchester City ee Leroy Sané, kaddib markii ay isaga hareen raacdada ay ugu jireen soo xero galinta ciyaaryahanka reer Ivory Coast ee Nicolas Pépé.
Si kastaba ha ahaatee, heshiiska uu Leroy Sané ku joogo kooxda Manchester City ayaa wuxuu ku egyahay xagaaga 2021, balse sida la fahansan yahay kuma faraxsana xaalada uu kaga sugan yahay Etihad Stadium, kaddib markii leyska indho tiray xili ciyaareedkan, sababa la xiriira go’aanka tababare Pep Guardiola.